सरल मिजास,सदैव हसिलो मुहार,अहं छैन आडम्बर पनि छैन । ठुलो बन्नु पनि परेको छैन । आम जनतासंग सजिलै र सरल हिसावले घुलमिल हुनसक्ने । आँटेको काम फत्ते गर्ने । रिस छैन राग छैन । सकारात्मक सोच राख्ने । अनुशासन र काम प्रतिको प्रतिवद्धतामा सम्झौता नगर्ने । कुशल ब्यवस्थापकीय क्षमताको प्रर्दशन गरि भ्याएका । समृद्ध र समुन्नत बीरगंजको सपना साकार पार्ने सोच बोकेका एक जना ब्यक्ति अहिले अहोरात्र जनताको वीचमा पुगिरहेको छ । राजनीतिक सत्ता आफनो लागि होइन आफनो समाज र समाजका ब्यक्तिहरुको खुशहालीकोलागि चाहिएको छ । बैभवशाली बीरगंज निर्माणको सपनालाई साकार पार्न लागि पर्ने त्यो ब्यक्ति हो बसरुदिन अन्सारी ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट मुलुकको आर्थिक राजधानीको उपमा पाएको बीरगंज महानगरको मेयरका उम्मेदवार । उनै अन्सारीसंग चुनावी सेरोफेरोमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश - सम्पादक
फरक पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो । एमालेमा प्रवेश गरेपछि तपाईको सक्रियता पनि निकै बढेको छ । अरु पार्टीमा पनि रहनु भएको थियो एमाले चाही कस्तो रहेछ ?
बिचारधारा प्रमुख बिषय हो । हिजो म अरु पार्टीमा थिए ती पार्टीहरुले बोकेको बिचार र ब्यवहारमा मेल खाने अवस्था मैले देखिन । हिजोका दिनमा पार्टीभित्रै बिभिन्न खालका प्रवृति बोकेका मान्छेहरुले पार्टी भन्दा पनि नीजि स्वार्थलाई बढी ध्यान दिने गरेको परिपाटी देखेको ,सहेको र भोगेको म एमालेमा आइसकेपछि पो मलाई पनि बल्ल मैले खोजेको पार्टी फेला प¥यो भन्ने ठानेको छु । मेरा आफन्तजन साथी भाईले समेत एमाले प्रवेश गर्ने मेरो निर्णयलाई ठिक भनेका छन । नेकपा एमाले प्रष्ट दृष्टिकोण भएको पार्टी हो । बिचारका हिसावले सबै भन्दा प्रष्ट पार्टी एमाले ,कार्यशैलीका हिसावले पार्टी प्रमुख ब्यक्ति गौण भन्ने बिधि स्थापित गरेको पार्टी पनि एमाले।
म एमालेमा आएपछि पो थाहा पाए एमालेमा संगठीत भएको हरेक ब्यक्ति आफनो क्षेत्रमा आ आफनै स्तरबाट क्रियाशिल छ । ब्यक्ति को हो भन्ने कुरा प्रमुख होइन रहेछ । पार्टीको निर्णय सर्वोपरी । मलाई त यति खुशी लाग्यो की पार्टीका सबै तह आफनै धुन र लयमा निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउनु पर्छ भनेर लागेका छन । म मान्छे नै हो मेरो पनि कमीकमजोरी होलान तर पार्टीपंक्तिलाई त्यो बिषय महत्वपूर्ण लागेन , महत्वपूर्ण त पार्टीलाई कसरी जिताउने भन्ने पो रहेछ । यति अनुशासीत पार्टीपंक्ति बिचारको प्रस्तुतीमा त्यही आदर शालिनता तर कठोर प्रस्तुती निर्णय भएपछि गजवको हार्दिकता र एकताको भावना पार्टी भनेको त एमाले नै हो ।
तपाई ब्यवसायी मान्छे मनग्गे पैसा पनि भएको मान्छे तर राजनीतिमै चाही लाग्न किन खोज्नु भएको हो ?
तपाईले भनेको ठिक हो म ब्यवसायी पनि हु । त्यो संगै म बीरगंजको सचेत नागरिक पनि हु । आम मान्छेलाई पनि यो लाग्दो हो । आर्थिक उपार्जनको हिसावले ठिक ठाक भएको मान्छेलाई अव मेयर नै किन हुनु प¥यो ? राजनीतिमै नै किन लाग्नु प¥यो ? मैले बीरगंजको हु भनेर गौरव गर्ने ठाउ छ भने मैले त्यो बीरगंजकोलागि केही गर्नपनि त सक्नु प¥यो नी । आजको पुस्ता जति एडभान्स छ भोलीको पुस्ता त्यो भन्दा एडभान्स हुन्छ ।
आउने पुस्तालाई हामीले कस्तो बीरगंज हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सवालले मलाई राजनीतिमा तान्यो । राजनीतिका माध्यमले आधुनिक बीरगंज भोलीको पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर नै म राजनीतिमा आए , त्यसैकोलागि म राजनीतिमा छु । राजनीतिमा आजदेखी होइन अलि पहिला देखीनै थिए । तर बीरगंजको ऐतिहासिकताको निरन्तरता दिन सक्ने गरि आधुनीक रुपमा बीरगंजलाई निर्माण गर्ने सपना एमालेमा छ । म एमालेको प्रतिनिधिको रुपमा त्यो सपनालाई कार्यरुप दिन पार्टीले अगाडि सारेको एउटा पात्र हु । समग्रमा, बीरगंज भन्ने बित्तिकै धेरै कुरा मानसपटलमा सरर्सर्ती घुम्ने अवस्था बनाउने काम हाम्रो हुनेछ ।
त्यसा हो भने बीरगंजमा तपाईले चुनाव जित्ने आधार के छन त ?
नेकपा एमालेको दृष्टिकोण, देश र जनताप्रतिको उसको जिम्मेवारी र जवाफदेहीता कार्यकर्तामा आधारीत हाम्रो पार्टी पंक्ति, आजसम्म एमालले गरेको लोककल्याणकारी कामहरु जस्तै बृद्ध भत्ता १ सयबाट शुरु गरेर २ हजार पु¥याइएको छ । एकल महिलाहरुलाई भत्ता गाउँको बिकासकालागि बजेटको बिनियोजन । मधेशका सीमावर्ती गाविसमा बिकासलागि सीमा बिकास कार्यक्रम मधेशका जिल्ला सदरमुकामहरुको ब्यवस्थित बिकासकालागि एमाले सरकारले ५० करोड रुपैया दिएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माणकालागि पहिलो पटक के.पी .ओली नेतृत्वको सरकारले ४ अर्व रुपैया बिनियोजन ग¥यो नीजगढमा अन्तराष्ट्रीय बिमान स्थल , निजगढदेखी काठमाण्डौ सम्मको दुर्तमाग अहिले बीरगंज पथलैयामा बन्दै गरेको ६ लेनको सडक यो सबै एमाले सरकारको पालामा भएको कामहरु हो । यसले पनि के देखाउछ भने बिकास र समृद्धि प्राप्तीको सपना पनि एमालले हेरको छ र प्राप्ती पनि एमालेकै नेतृत्वमा सम्भव छ । महानगरवासीले यो बुझेका छन । यो संगै महानगरको बिकास र समृद्धिका योजना हाम्रो पार्टीसंग छ यो नै हाम्रो जीतको आधार हो ।